Crusher Factory, abahlinzeki - China Crusher Abakhiqizi
Isigaxa crusher kufanelekile kwasani izinto nge ubulukhuni naphakathi. Inezinzuzo zedizayini enengqondo, ukusebenza okuzinzile, usayizi omkhulu wokuphakelayo, usayizi ofanayo wokukhipha izinhlayiya, nokulungiswa okulula. Ikakhulukazi, kusindisa izisebenzi kanye nenqubo yokuqala yokugqashuka komhlathi.
Lo mshini ungasetshenziswa kabanzi emgqeni wokukhiqiza itshe we-hydropower, onguthelawayeka nezinye izimboni. Isigubhu samakamelo amathathu, umzimba we-rotor onokuxhumeka okungenamakhi we-taper sleeve, isando sokumelana nepuleti esisebenza kahle, faka ifomu lokufaka, isihlalo esithwelwe ukuthambeka, ipuleti eliyingqayizivele lomumo wamazinyo wokuvula, ukuvulwa okuningana kokuqondisa kozimele, isikulufa noma idivayisi yokuvula i-hydraulic yenza kulula kakhulu ukufaka esikhundleni sezingxenye ezisengozini nokulungiswa.
Lolu chungechunge lwemikhiqizo lunezici zesilinganiso esikhulu sokuchotshozwa, usayizi wezinto ezifanayo, isakhiwo esilula, ukusebenza okuthembekile, ukugcinwa okulula nezindleko zokusebenza kwezomnotho. Isetshenziswa kabanzi kwezimayini, ukuncibilikisa, izinto zokwakha, umgwaqo omkhulu, ujantshi, ukonga amanzi, imboni yamakhemikhali neminye iminyango eminingi. Ingakwazi ukuchoboza izinto ezahlukahlukene ngamandla acindezelayo ngaphansi kwama-350 MPa.
Ring isando crusher uhlobo olusha umshini kwasani. Kufanelekile ukuchoboza izinto ezinama-brittle, medium hard kanye nezinto ezahlukahlukene ezinamanzi amancane. Kwizinto zokwakha, insimbi, imboni yamakhemikhali, imboni ekhiqiza amandla kagesi, isetshenziselwa ukuchoboza amalahle, i-gangue, i-sandstone, i-shale, i-limestone, i-gypsum namanye amaminerali.